Apple wuxuu sii daayaa macOS 11.6 oo leh hagaajinta amniga | Waxaan ka imid mac
Toni Cortes | 13/09/2021 20:03 | macOS Big Sur
Saacad ka hor, Apple ayaa si lama filaan ah u soo saartay nooc cusub oo ah macOS Big Sur dhammaan adeegsadayaasha, 11.6. Kani waa cusboonaysiin cusub oo hagaajisa godadka amniga qaarkood.
Oo waxaan idhaahdaa waxay ahayd si lama filaan ah, maxaa yeelay ma jirin nooc ka mid ah cusboonaysiintaan beta. Taas micnaheedu waa wax -ka -beddelka kaliya ee lagu sameeyay softiweerka waa ujeeddooyin ammaan. Markaa sugitaan iyo waa inaan sida ugu dhakhsaha badan u cusbooneysiino, haddiiba ay dhacdo.
Iyadoo Apple sii waddo tijaabada beta macOS 12 Monterey, mar horeba wejigiisii ​​u dambeeyay ka hor inta aan la bilaabin soo dhowaanshaha, ayaa hadda naga yaabisay casriyeyn cusub oo macOS Big Sur ah dhammaan isticmaaleyaasha, 11.6.
Software -kan cusub ayaan hore loogu sii dayn beta, waxayna keenaysaa laba cusbooneysiin oo amni oo muhiim ah. Waxaa sidoo kale jira casriyeyn loogu talagalay kuwa ordaya MacOS Catalina. Markaa waa inaan sida ugu dhakhsaha badan u cusbooneysiino, haddiiba ay dhacdo.
Wuxuu hagaajiyaa cillad haysatay ka shaqaynta PDF loo abuuray ujeeddooyin xaasidnimo ah oo keeni kara in la fuliyo xeer aan sharci ahayn. Apple waxay ka warqabtaa warbixin ah in dhibaatadan si firfircoon looga faa'iidaysan lahaa. Cusboonaysiinta cusub ayaa hagaajisa.
Waxay kaloo xireysaa dalool kale oo amni oo maalmahan laga helay habaynta qaar Waxyaabaha mareegtada ah loo abuuray ujeeddooyin xaasidnimo ah, oo horseedi kara fulinta xeerka aan loo meel dayin.
macOS 11.6 (dhisi lambarka 20G165) ayaa hadda loo heli karaa dhammaan isticmaaleyaasha waana inay ka dhex muuqdaan Doorbidyada Nidaamka> Cusboonaysiinta Software.
Iyadoo la tixgelinayo inay yihiin laba qof oo kaliya hagaajinta amnigaHaddii shirkaddu ku deg degtay si ay u bilowdo cusboonaysiintaan cusub iyada oo aan xitaa ku tijaabin beta, waa sababta oo ah waxay saxaysaa dhowr cillado amniga ah oo ay tahay inay muhiim noqdaan. Markaa ha ka waaban inaad cusboonaysiiso Mac -kaaga sida ugu dhakhsaha badan, haddii ay dhacdo. Waa laguu digay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Big Sur » Apple wuxuu sii daayaa macOS 11.6 oo leh hagaajin xagga amniga ah
64GB ayaa taariikhda ku geli kara iPhone 13